Muxuu ka yiri Maxamed Saalax kulanka adag ee kooxaha Liverpool iyo Man United? – Gool FM
(Liverpool) 17 Jan 2020. Xiddiga kooxda kubadda cagta Liverpool ee Maxamed Saalax ayaa xaqiijiyay in kulanka ay kula ciyaari doonaan Manchester United Premier League Aaxada soo socota ay talaabo muhiim ah u tahay ku guuleysigooda koobka horyaalka.
Dhinaca kale Maxamed Saalax ayaa cadeeyay in xiddigaha kooxda Liverpool ay doonayaan inay ka gudbaan bar-bardhicii ay kula galeen Manchester United kulankii lugta hore ee horyaalka Premier League.
Maxamed Saalax ayaa wareysi uu bixiyay kahor kulanka adag ee la wada sugayo ay isku wajihi doonaan Liverpool iyo Man Utd Premier League wuxuu ku sheegay:
“Manchester United waxay u muuqataa si wanaagsan marka loo fiiriyo lixda kooxood waaweeyn ee horyaalka Premier League, taasina si fiican ayaan kaga war qabnaa, waxaan rajeynayaa inaan diirada saari doono saddexda dhibcood ee kulanka”.
“Waxaan xasuustaa inay sifiican u ciyaareen kulanka lugtii hore, waxay ahayd ciyaar aad u fiican ee labada dhinac ah, waxaan helnay fursado balse si fiican uguma faa’ideysanin, taasina waxay keentay inaan labo dhibcood iska qasaarinay” ayuu yiri Maxamed Saalax.